दशैंको उपहार भनिएको पानी अझै नआउँदा सांसदहरुको दुःख मनाइ
लामो समयदेखि खानेपानीको पर्खामा रहेको काठमाडौंमा आगामी ६० दिनभित्र मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको धाराबाट झर्ने भएको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरुले मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा कहिले आउँछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ६० दिनभित्र काठमाडौं आइपुग्ने दाबी गरेका हुन् ।
समितिको आइतबारको बैठकमा सचिव ठाकुरले ६० दिनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंका उपभोक्ताको धारामा झर्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले भनेका थिए, म ठोकुवा गर्छु ६० दिनभित्रै मेलम्चीको सबै काम सकिन्छ ।
विगतमा कर्मचारीले काममा ढिला गरेकाले समयमै मेलम्चीको पानी आउन सकेन । यसअघि मन्त्री विना मगरले दशैंअघि नै पानी आउँछ भनेकामा पनि सचिव ठाकुरले माफी मागे । ‘मन्त्रीज्यूले भनेको विषयमा माफी माग्छु’, ठाकुर भने, ‘हामीलाई विश्वास गर्नुस् २ महिनामा प्राविधिक काम सकेर पानी हाल्छौं ।’
निर्माणको काम सकिएपछि पानी जम्मा हुन ३ दिन लाग्ने भन्दै त्यसपछि काठमाडौंका धारामा पानी झर्ने उनले बताए ।
किटान गर्न सांसदहरुको माग
यसअघि समिति बैठकमा सांसदहरुले दशैंअघि आउँछ भनेको मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भनेर मन्त्रालयका जिम्मेवारी व्यक्तिको जवाफ मागेका थिए ।
सांसदहरुको जिज्ञासामा मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले २ महिनामा सबै काम सकिने जानकारी दिएका थिए । उनको प्रस्ट्याइँमा सांसदहरुले विश्वास मान्न सकेनन् । र, सोधे, दुई महिनामै मेलम्चीको पानी आउने आधार के हो ?
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अबको दुई महिनामा पानी आउँछ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । आउँदो मार्चसम्म पानी आउँछ भन्ने आधार उनले खोजे । उक्त बैठकमा विभागीय मन्त्री विना मगर बोलाए पनि आएकी थिइनन् । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसहितका सांसदले रोष प्रकट गरेका थिए ।